စားစရာ မရှိလို့ နွမ်းပါးပြီး ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်
ဈေးဗန်းရွက် ကျောင်း မတက် နိုင်သူတွေ။
ပြည့်တန်ဆာ ဖြစ်သူတွေ။ ပေါလှတဲ့ တိုင်းပြည် မှာ
ထားစရာ နေရာ မရှိလောက်အောင်ပိုက်ဆံ ကျိကျိတက် ချမ်းသာ သူတွေ ။
ထင်တိုင်း စိတ်တိုင်းကျ ။ ပိုက်ဆံ ဖြုန်း နိုင်လို့ ဖြုန်းချင်လို့ ။
ဘောလုံး အသင်း ကိုယ်ပိုင် ငွေကုန်ကြေးကျ ထောင်တာ။
နာယက လုပ်တာ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ ကြိုက်တာ လုပ်ခွင့် ရှိပါတယ်။
ဘယ်သူကမှ အထူးသဖြင့် ပြည်သူ အစစ်။ပြည်သူ့ အကျိုး ပိုမို
လိုလားသူတွေက လုံးဝ ( လုံးဝ ) ကို စိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ မဝေဖန်ပါဘူး။
သူကြီးသား ချက်ကြီး ရွာ မှာ သူ့ သူငယ်ချင်း တွေ နဲ့ အုပ်စု ဖွဲ့
ကိုယ်ပိုင် ကြက် နဲ့ ကြက် တိုက် သလိုပါဘဲ။
YU FC / ဘာ ညာ FC တွေ နဲ့ သာ သီးသန့် နေကြပါလားကွယ်။
University of Arts and Science, Yangon.
Universities တွေ ခေါင်းစဉ် အောက် မှာ
နာယက ဂုဏ်။ ပညာ ဂုဏ်။ အသက် အရွယ် ဂုဏ်။
အများလေးစား အားကျ လောက်တဲ့ ဂုဏ်။
ရှိတဲ့ သူ တစ်ယောက်ယောက်တော့ ဖြစ်စေ ချင်မိပါတယ်။
စေတနာမေတ္တာ ရှိလို့ ။ နောင်လာနောင်သား အကျိုးကို လိုလားလို့ ။
ငယ်စဉ်ကထဲက ၀ါသနာ ပါလို့ ။ မြန်မာကို ကမ္ဘာက သိစေချင်လို့။
စတဲ့ မြင့် မြတ် တဲ့ မဟာ ဂရုဏာ ရှင် စိတ် ရှိတယ် ဆိုရင် --
နောက်ကွယ်ကနေပြီး -- နေရာ မယူဘဲ ထောက်ပံ့ မယ်
ဆိုရင်တောင် လေးစား မိ လာမှာ အသေအချာပါ။
စပွန်စာ မပေးချင်လဲ နေပါလား။ စပွန်စာ မရချင်လဲ နေပါစေတော့ ။
မမှန်တဲ့ နေရာ ကို နေရာ ယူ တတ်တဲ့ သူတွေကိုတော့ ----------
အရင်ကထဲ က Miss Internet ဆု လောက် ရတဲ့ Miss တွေကို
ဒီလောက် နက်နက် နဲနဲ စိတ် မ၀င်စားခဲ့ပါဘူး။
Miss မရဘူး။ ရုပ် ဘယ်လောက် ဆိုးဆိုး ကမ္ဘာကျော် တဲ့
ပညာ အရည်အချင်း ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ။
အတွေးအခေါ် ကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ။
စိတ်ကောင်းစေတနာ ကောင်းတဲ့ သူတွေ။ပရဟိတ စိတ်ရှိသူ။
တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်။ မျိုးချစ် စိတ် ပြင်းထန်သူ။
အဆင်းထက် အချင်း ရှိသူ မည်သည့် မိန်းမ တွေကို
မဆို လေးစားချီးကျုး အားကျ သဘောကျ ပြီးသားပါ။
မနာလို စိတ်။ သ၀န်တို စိတ် လုံးဝ ( လုံးဝ ) မရှိပါဘူး။
မိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် ကို ကိုယ်တိုင်လဲ
တစ်ခြား မိန်းမ တွေ အားလုံးလည်း အပြည့်အ၀ ရစေချင်ပါတယ်။
မိန်းမ တိုင်းက လည်း Woman Right ကို အပြည့်အ၀ ရအောင် တောင်းရပါမယ်။
Miss ဖြစ်ဖြစ်။ Model ဖြစ်ဖြစ် ။သာမန် အမျိုးသမီး တစ်ဦးဦး ဖြစ်ဖြစ်။
လန်ဘော်ဂနီ မကလို့ ဟယ်လီကော်ပတာ စီးစီး။
ဘယ် အကောင် နဲ့ ဘဲ တွဲတွဲ ။
ဘယ် အခွေ ဘဲ ထွက်ထွက် ။
ဖင်ဗူးတောင်းဘဲ ထောင်နေ ထောင်နေ မကဲ့ရဲ့ ပါဘူး။
အထင်လဲ မသေးပါဘူး။ သူ့ ကိုယ်ပိုင် personal ကိစ္စ။
ယောက်ကျား ၁၀ ယောက် အထက် ယူယူ။
ကလေး တစ်ယောက်။ အဖေ တစ်ယောက် နှုန်းဘဲ မွေးမွေး။
အဖေ မဖေါ်ချင်လို့ မဖေါ်ဘဲ ကလေး ၁၀ ယောက်ဘဲ မွေးမွေး။
ကိုယ် ရှာ ကျွေး နိုင်လို့ ကိုယ် မွေးတာလေ။
မွေးသာ မွေး ။ အထင် မသေးဘူး။
မိန်းမ တစ်ယေက်ရဲ့ သတ္တိ နဲ့ မိခင် စိတ် ကို ချီးကျုး ဦးမယ်။
မုဆိုးဖို။ ဆယ်ခုလပ်။ကလေး ၁၀ ယောက်အဖေ။
အသက် အလွန်ကြီးတဲ့သူ။အသက် အလွန်ငယ်တဲ့သူကို တွဲ ဦးမလား။
ယူဦးမလား။ ချစ်ဦးမလား။ မယူဘဲ သေတဲ့ အထိ တွဲ နေဦးမလား။
ကိုယ် စိတ်ချမ်းသာ မယ် ထင်တာ ကိုယ် လုပ်ပိုင် ခွင့် အပြည့် ရှိတယ်။
လုံးဝ ( လုံးဝ ) မကဲ့ရဲ့ ပါဘူး။
မိန်းမ တွေ အားလုံး အတွက် အချစ် မှာ လွတ်လပ်ခွင့် ရှိပါတယ်။
တံဆိပ်ခတ်ပြီးသား တရားဝင် မိန်းမ ရှိတဲ့ သူတစ်ပါး
လင်သား ယောက်ကျား ကို လု့ယူ ။ကြားဖြတ်စုံတွဲ တွဲခုတ် ။
တစ်ခြား ယောက်ကျား ရဲ့ မိန်းမကို အသည်းကွဲ အောင်။
ငိုရအောင် လုပ်တာ မှ မဟုတ်တာ။
သူတစ်ပါး ယောက်ကျား လင်သား ကိုတော့ မခိုး မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
မသိလို့ များ တွဲ မိ ရင်တောင် သိတာ နဲ့ ချက်ခြင်း သာ အဆက်ဖြတ် လိုက်ပါ။
လွတ်လပ် တဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက် နဲ့ လွတ်လပ်သူ ယောက်ကျား တစ်ယောက်
ဘောလုံးကွင်း ထဲ အခွေ ရိုက် နေတောင် မီး မောင်း ထိုးပေးဖို့ အဆင်သင့် ပါ။
အဲ ဒါပေမဲ့ --
အကျင့်ပျက်ခြစားမှု။ မတရားမှု။ တရားဥပဒေ မစိုးမိုးမှု။
တွေ အလွန် များ တဲ့ ကိုယ်တွေ တိုင်းပြည် မှာ --
( White Card / NRC / FRC ) -- နိုင်ငံသား ဖြစ်မှု။
Citizen Right / Second Citizen Right / )
သေသေချာချာ ကွဲပြား ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
၈၂ ဥပဒေ မဖျက်သိမ်းရသေးဘဲ အတည်ဖြစ်နေဆဲ ဆိုရင်
လ၀က ဥပဒေ အရ ဆိုရင် --
ံA Myanmar Citizen !
ကျမ ( ဖိုးဖိုး အန်းကုန်းကြီးက ) NRC ပါ။
ကျမ ( ဖွားဖွား အန်းမကြီးက ) NRC ပါ။
ကျမ ( ပါးပါး ဖေဖေကလည်း ) NRC ပါ။
ကျမ ( မားမား မေမေ ကလည်း ) NRC ပါ။
ဒါဆို ရင် ကပ်ပြားလေးတွေ စီစစ်ချင်လို့ ပြပါလား။
နံပါတ် တွေရယ်။ ဘယ်မြို့နယ်က လ၀က ရုံးရယ်။
ဘယ် ( လ၀က ) ဌာန အကြီး အကဲ တွေက
ဘယ်နေ့ ဘယ် အချိန် တုံးက ထုတ်ပေးတာလဲ ဆိုတာ စီစစ် ချင်ပါတယ်။
သေချာ တဲ့ စစ်ဆေးမှု တွေ မှန်ကန် တယ် ဆိုရင်တော့ ---
A Myanmar Citizen ။ NRC ကဒ် အစစ် ရသူ တစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ --
ကန့်ကွက်စရာ မရှိပါဘူး။ Vote လုပ်ဖို့လဲ အဆင်သင့် ပါဘဲ။
စပျစ်သီး နဲ့ မလုပ်ထား တဲ့ ၀ိုင် ပေမဲ့ မကျည်းသီး နဲ့ ဘဲ ၀ိုင် လုပ်လုပ်
အားပေး လျက်ပါ ---( Miss Universe 2013 ) ကိစ္စ ကို သာ ပြောတာနော်။
အချိုရည် တွေကို တော့ FDA စားသုံးသူများကာကွယ်ရေး အသင်း
ကနေ စစ်ဆေးခိုင်း မှာနော်။
ကဏ္ဍ မတူဘူးနော်။ တကန့်စီ။ အားပေးတာ နဲ့ စီစစ် တာ ။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သုံးသပ်ဖော်ပြနိုင်စွမ်းရှိသော ပို့စ် ပိုင်ရှင် Chawchaw Mirror အား လေးစားစွာဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:42 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook